Shacabka Puntland oo qaati ka taagan Daacish oo boob ku haysa hantidooda - Caasimada Online
Home Warar Shacabka Puntland oo qaati ka taagan Daacish oo boob ku haysa hantidooda
Shacabka Puntland oo qaati ka taagan Daacish oo boob ku haysa hantidooda
Qandala (Caasimada Online) – Qeyla dhaan xooggan ayaa kasoo yeereyso dadka reer miyiga ah ee dega deegaanada hoosyimaada degmada Qandala ee gobolka Bari.
Arrintaan ayaa ka danbeysay kadib markii maliishiyada kooxda Daacish ee ku sugan deegaanada hoos yimaada Qandala ay dadka shacabka ee reer guuraaga ah ka dhacaan xoolahooda kadibna la gala gododka buuraha deegaanadaasi.
Dadka reer miyiga ah ayaa bilaabay in ay ka soo barakacaan deegaanada qaar si ay ula soo baxsadaan xoolahooda.
Dad diiday in magacooda la xigto ayaa maamulka Puntland ugu baaqay in ay wax ka qabtaan si deg deg ahna looga soo gaaro boonka Daacish ay ku hayso shacabka reer miyiga ah.
Deegcanada hoos yimaada degmada Qandala ayaa ayaa waxaa ku sugan kooxda Daacish oo si dhuumaaleysi ah ugu nool gododka buuraha Qandala ku hareereysan.